Tokony jerena akaiky kokoa ny resaka tsipelin-teny anatin'ity takelaka ity
Ilaina tsaraina ny teny diso tsipelina ary koa ireo fehezanteny izay mety ahitana hadisoan-drariteny. Mety ho moramora kokoa angamba ny asa fanitsiana tsipelina amin'ny alalan'ny fitaovana eto amin'ireto pejy ireto.
I Illinois dia faritany mizaka tena iray eo amin'ny faritra afovoan'i Etazonia, manana fiantsoana hoe Midwest. Ny renivohiny dia Springfield. Io faritany mizaka tena amerikana io dia mizara sisintany amin'i Michigan, Wisconsin, Missouri, Kentucky ary Indiana.
Araka ny Bureau du recensement an'i Etazonia, ny isam-ponina dia 12 419 293 eo amina velarantany 149 998 km² ( 83 mpo./km²). Ary araka ny fanakekezana ataon'io birao fanisam-ponina io ihany, 12 763 371 ny isam-ponina tamin'ny taona 2005 ; izany no midika hoe mitombo 2.5% ny isam-ponina isaky ny dimy taona.
Tamin'ny taona 2000 ; 23,3% ny olona mipetraka any Illinois no mipetraka ao amin'ny tanànan'i Chicago ; misy 43,3% no mipetraka ao amin'ny faritan'i Cook ; ary 65,6% ny olona mipetraka ao amin'ny tanàna lehiben'i Chicago.
Avy any aminy Wisconsin Glaciation ny jeôlôjia ny Illinois ; Nikasika ny Amerika avaratra io zavatra io efa nisy 87.000 taona ; dia nijanina efa nisy 9.000 taona izay.
((en)) Tranonkala ofisialy ny firenena Illinois
((en)) Tranonkala ofisialy ny Torisma any Illinois
Ilay Faritany 102 Ny firenenna Illinois
Adams · Alexander · Bond · Boone · Brown · Bureau · Calhoun · Carroll · Cass · Champaign · Christian · Clark · Clay · Clinton · Coles · Cook · Crawford · Cumberland · DeKalb · DeWitt · Douglas · DuPage · Edgar · Edwards · Effingham · Fayette · Ford · Franklin · Fulton · Gallatin · Greene · Grundy · Hardin · Hancock · Henderson · Henry · Iroquois · Jackson · Jasper · Jefferson · Jersey · Jo Daviess · Johnson · Kane · Kankakee · Kendall · Knox · LaSalle · Lake · Lawrence · Lee · Livingston · Logan · Macon · Macoupin · Madison · Marion · Marshall · Mason · Massac · McDonough · McHenry · McLean · Menard · Mercer · Monroe · Montgomery · Morgan · Moultrie · Ogle · Peoria · Perry · Piatt · Pike · Pope · Pulaski · Putnam · Randolph · Richland · Rock Island · Saline · Sangamon · Schuyler · Scott · Shelby · St. Clair · Stark · Stephenson · Tazewell · Union · Vermilion · Wabash · Warren · Washington · Wayne · White · Whiteside · Will · Williamson · Winnebago · Woodford
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Illinois&oldid=940554"
Dernière modification le 12 Novambra 2018, à 16:03
Voaova farany tamin'ny 12 Novambra 2018 amin'ny 16:03 ity pejy ity.